မောင်ပေါက်ကျိုင်း ဒဏ္ဍာရီ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Editor's Notes » မောင်ပေါက်ကျိုင်း ဒဏ္ဍာရီ
Posted by kai on May 20, 2017 in Editor's Notes, History | 19 comments
မောင်ပေါက်ကျိုင်းသည် ဒိသာပါမောက္ခ ဆရာကြီးထံတွင် ပညာသင်ကြားနေသော တပည့်များတွင် အညံ့ဆုံးတပည့်ဖြစ်ပြီး မည်သည့်ပညာရပ်ကိုမှ ဖြစ်မြောက်အောင်သင်ကြား၍ မရပေ။ သို့သော် အလုပ်ကို အလွန်ကြိုးစားပမ်းစား လုပ်တတ်သူဖြစ်သဖြင့် ဆရာကြီး၏ အချစ်ဆုံးတပည့်တစ်ဦးလည်းဖြစ်သည်။
နှစ်စေ့၍ ဌာနေသို့ ပြန်ရန် အချိန်ကျသောအခါတွင် မောင်ပေါက်ကျိုင်းမှာ မည်သည့် ပညာရပ်ကိုမှ တတ်မြောက်ခြင်းမရှိသည့်အတွက် ဆရာကြီးမှာ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိသည်။ ထို့အတွက် သူ၏တပည့်အား အရေးကြီးသော စကားကြီးသုံးခွန်းကို မှတ်သားလိုက်နာရန် သင်ကြားပေးပြီး နေရပ်သို့ပြန်စေခဲ့သည်။
မောင်ပေါက်ကျိုင်း သင်ကြားရရှိခဲ့သော စကားကြီး (၃) ခွန်းမှာ
မအိပ်မနေ အသက်ရှည် ဟူ၍ ဖြစ်သည်။
မောင်ပေါက်ကျိုင်းသည် ပညာသင်ကြားရာမှ ပြန်လာခဲ့ပြီးနောက် လမ်းတွင် “သွားပါများခရီးရောက်” ဆိုသော စကားအတိုင်း မိမိနေရပ်သို့ မပြန်ပဲ ခရီးနှင်ခဲ့သဖြင့် တိုင်းပြည်တစ်ပြည်သို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ထိုတိုင်းပြည်မှာ နန်းတက်လာသော ဘုရင်ဟူသမျှ ချက်ချင်းသေဆုံးလေ့ ရှိသဖြင့် ဘုရင်လုပ်ဝံ့သူမရှိဘဲ မင်းလောင်းကို ရှာဖွနေသော တိုင်းပြည်ဖြစ်သည်။ မောင်ပေါက်ကျိုင်းသည် တရစပ်ခရီးနှင်လာခဲ့သဖြင့် ထိုတိုင်းပြည်သို့ အရောက်တွင် မောပန်းကာ အိပ်ပျော်သွားခဲ့သည်။
ထိုအချိန်တွင် မင်းလောင်းရှာဖွေရန် လွှတ်လိုက်သော ဖုသ်သွင်းရထားမှာ မောင်ပေါက်ကျိုင်း အိပ်နေရာနေရာသို့ ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက် ရောက်လာသဖြင့် မောင်ပေါက်ကျိုင်းကို မှူးမတ်တို့က ဘုရင်အဖြစ်လက်ခံရန် ပန်ကြားခဲ့သည်။ မောင်ပေါက်ကျိုင်းမှာ ထိုတိုင်းပြည်၏ အကြောင်းကို ရေရေရာရာ မသိသဖြင့် ဘုရင်အဖြစ်ကို ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပင် လက်ခံခဲ့သည်။
မောင်ပေါက်ကျိုင်းသည် ဘုရင်ဖြစ်လာပြီးနောက် စကားကြီးသုံးခွန်းထဲမှ မေးပါများစကားရ ဆိုသော စကားကို အမှတ်ရခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရင်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းပင် တိုင်းသူပြည်သားတို့နှင့် စကားစမြည်ပြောဆိုပြီး မင်းလောင်းရှာဖွရေသည့် အကြောင်းကို မေးမြန်းမိသည်။ ထိုအခါ ဤတိုင်းပြည်ရှိ ဘုရင်အားလုံး နန်းတက်ပြီးလျှင် နောက်တစ်နေ့၌ နတ်ရွာစံ ကံတော်ကုန် လေ့ရှိကြောင်း စုံစမ်းသိရှိခဲ့သည်။
ဘုရင်ဖြစ်လာသော မောင်ပေါက်ကျိုင်းသည် ညဖက်တွင် အလွန်ငိုက်မျဉ်းလာသော်လည်း မအိပ်ပဲ မိဖုရားကိုသာ အိပ်စေကာ သူ၏ စက်ရာတွင် ငှက်ပျောတုံးတစ်တုံးကို ချထားသည်။ သူ၏ စိတ်ထဲ၌ မအိပ်မနေ အသက်ရှည် ဟူသော စကားကိုသာ အမှတ်ရနေသည်။
ညသန်းခေါင်သို့ ရောက်သောအခါမိဖုရား၏ ချစ်သူ နဂါးက အိပ်ခန်း အတွင်းသို့ ဝင်လာပြီး ငှက်ပျောတုံးကို မောင်ပေါက်ကျိုင်းအမှတ် နှင့် ပေါက်သတ်သည်။ ထိုအခါ သူ၏ အစွယ်မှာ ငှက်ပျောတုံးတွင် ကပ်ငြိပြီး ခွာမရ ဖြစ်နေလေသည်။ မောင်ပေါက်ကျိုင်းက ထိုအချိန်ကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး နဂါးကို ဓားနှင့်ပိုင်း၍ သတ်လိုက်လေသည်။
သူမ၏ ချစ်သူနဂါးကို မောင်ပေါက်ကျိုင်းက သတ်ပစ်သည့်အတွက် မိဖုရားမှာ မကျေနပ်ပဲ မောင်ပေါက်ကျိုင်းကို အလောင်းအစား တစ်ခုလုပ်ရန် စိန်ခေါ်သည်။ မောင်ပေါက်ကျိုင်းက လက်ခံသော အခါတွင် မိဖုရားက သူမ မေးသော စကားထာကို ဖြေနိုင်ပါက ဘုရင်အဖြစ်ဆက်လက်စိုးစံနိုင်ပြီး မဖြေနိုင်ပါက အသတ်ခံရမည်ဟု ဆိုသည်။
ထို့နောက်မိဖုရားက မောင်ပေါက်ကျိုင်းအား “ရာပေးလို့ဆုတ် ထောင်ပေးလို့ချုပ် ချစ်တဲ့သူအရိုး ဆံထိုးလုပ်” ဟူသော စကားထာကိုဝှက်သည်။ မောင်ပေါက်ကျိုင်းသည် ထိုစကားထာကို ကြားပြီးသော အခါ အဖြေကို စဉ်းစားမရနိုင်သဖြင့် ၇ရက်စောင့်ဆိုင်းရန် အချိန်တောင်းယူပြီး စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြင့် ဥယျာဉ်တော်အတွင်းသို့ ထွက်လာခဲ့ပြီး မည်သို့လုပ်ရမည်မသိဖြစ်နေခဲ့သည်။
သို့ရာတွင် သတင်းကြားဖြင့်လိုက်လာသော မောင်ပေါက်ကျိုင်း၏မိဘနှစ်ပါးက အစာကြွင်းစွန့်သည်ကိုလာစားသည့် သစ်ပင်ပေါ်မှ ကျီးဖို၊ ကျီးမ နှစ်ကောင် စကားပြောနေသည်ကို (မဂဓဘာသာစကားနားလည်ကြသဖြင့်) နားစွင့်ကြည့်မိကြသည်။
ကျီးဖိုက ကျီးမအား လတ်တလော လူအများစိတ်ပါဝင်စားနေကြသည့် မိဖုရားကြီး၏ စကားထာအကြောင်းပြောပြသည်၊ ကျီးမက ဆက်လက်မေးမြန်းရာ ဤတိုင်းပြည်ရှိ မိဖုရားက မောင်ပေါက်ကျိုင်းအား စကားထာဝှက်သည်ကို မဖြေနိုင်သဖြင့် အသတ်ခံရတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောသည်။
ကျီးမက ကျီးဖိုအား စကားထာ၏ အဖြေအကြောင်းကို မေးသောအခါ ကျီးဖိုက သေသွားသောနဂါးမှာ မိဖုရားကြီး၏ ချစ်သူမှာဖြစ်ပြီး သူမ၏ချစ်သူ နဂါးသေသွားသောအခါ အသပြာတစ်ရာပေး၍ အရေကိုဆုတ်စေသည်။ ထို့နောက် ထိုအရေခွံကို အသပြာတစ်ထောင်ပေး၍ အိပ်ရာချုပ်စေပြီး နဂါး၏ အရိုးကိုမူ ဆံထိုးလုပ်၍ ပန်ဆင်ထားသည့်အကြောင်းများကိုဝှက်ကြောင်းရှင်းပြသည်ဟုဆိုသည်။
မိဘများထံမှတဆင့် စကားထာ၏ အဖြေကိုသိရသော မောင်ပေါက်ကျိုင်းသည် အဖို့ မိဖုရားအား စကားထာ၏ အဖြေကိုပေးနိုင်သွားလေတော့သည်။ ထို့နောက်တွင် မောင်ပေါက်ကျိုင်းအတွက် ရန်ရှင်းသွားပြီ ဖြစ်သဖြင့် ဘုရင်အဖြစ်နှင့် ဆက်လက်စိုးစံလေတော့သည်။
မောင်ပေါက်ကျိုင်း၏ မိဖုရားကြီးမှ နောင်အခါတွင် အမြွှာ သားတော် ၂ ပါးကို ဖွားမြင်သည်။ ထိုသားတော် ၂ ပါးစလုံးမှာ မျက်စိမမြင်ပဲ မဟာသမ္ဘာ၀နှင့် စူဠာသမ္ဘာ၀ဟုတွင်သည်။
ဘုရင်သည် သားတော် နှစ်ပါးကို သမားတော်အမျိုးမျိုးနှင့် ကုသသော်လည်း အရွယ်ရောက်သည်အထိ မည်သို့မျှကုသ၍ မရပေ။ ထို့ကြောင့် ရှက်ခြင်းဖြစ်၍ သားတော် နှစ်ပါး ကို ဖောင်ပေါ်တွင် တင်၍ ဧရာဝတီမြစ်အတွင်းသို့ မျှောစေသည်။ *(မဟာသမ္ဘာ၀နှင့် စူဠာသမ္ဘာ၀သည် သရေခေတ္တရာမင်းများ ဖြစ်လာသည်။)
မဟာသမ္ဘာ၀နှင့် စူဠာသမ္ဘာ၀ညီနောင်အား ဖခမည်းတော်က ဧရာဝတီမြစ်အတွင်းသို့ မျှောလိုက်စေရာတွင် မသိုးထမင်းမသိုးဟင်းရိက္ခာများကိုထည့်ပေးလိုက်သည်။
စစ်ပင်ကြီးကိုင်းကျနေရာ (ယခုအခါ စစ်ကိုင်း) အရောက်တွင်ညီနောင်နှစ်ဦးလုံး အမြင်အာရုံမရှိသည်ကိုအခွင့်ကောင်းယူ၍ သူတို့အစာစားစဉ် စန္ဒမုခိ ဘီလူးမက အသံတိတ်ဝင်ရောက်ခိုးစားသည်။ ဤသည်ကိုလက်ဦး၌မသိသော်လည်း အစားအစာများ လျှင်မြန်စွာလျော့နည်းလာသည်ကိုရိပ်မိပြီး ထက်မြက်သော မင်းသား နှစ်ပါးက ဘီလူးမ၏ လက်ကိုဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့သည်။
ဘီလူးမက သူ့အားမသတ်ရန် တောင်းပန်၍ မင်းသားတို့အား လိုအပ်သမျှကူညီမည်ဟု ပြောသည်။ မင်းသား နှစ်ပါးက ဘီလူးမအား သူတို့၏ မျက်စိကို ဆေးကုပေးရန် တောင်းဆိုသည်။ ဘီလူးမက မင်းသား နှစ်ပါး၏ မျက်စိကို ဆေးစ၍ ကုသော နေရာကို ယခုအခါ ‘စကု’ ဟုတွင်၍ မင်းသား နှစ်ပါး မျက်စိစတင်အလင်းရသော နေရာကို ယခုအခါ ‘စလင်း’ ဟုတွင်သည် ဟု ပြောစမှတ်ပြုကြသည်။
မင်းသား နှစ်ပါးသည် ဧရာဝတီမြစ်အတွင်းသို့ ဆက်လက်မျှောလာခဲ့ပြီးနောက် ယခုပြည်မြို့တည်ရှိရာ သရေခေတ္တရာမြို့အနားသို့ ဆိုက်ရောက်သည်။
ထိုနေရာတွင် ရသေ့ကြီးတစ်ပါး၏ တောထွက်တရားအားထုတ်ရာအနီး စွန့်မြဲဖြစ်သော ကျင်ငယ်ရေကို အစဉ်လာသောက်သည့် သမင်မမှ ဗေဒါရီ ဆိုသော လူသားသမီးငယ် ဖွားမြင်ခဲ့သည်ဟု ဒဏ္ဍာရီတွင် ဆိုသည်။ ရသေ့ကြီးသည် သမီးငယ်အား အဓိဌာန်ဖြင့် လက်ညှိုးမှ နို့ချိုထွက်စေကာ ကျွေးမွေးပြုစုခဲ့သော်လည်း ဗေဒါရီ အရွယ်ရောက်လာပြီးနောက် ကျောင်းသင်္ခန်းနှင့်မအပ်စပ်သော သူ့ကို အလိမ္မာသုံး၍ ဘူးသီးတစ်လုံးတွင် အပ်ပေါက်ထက်အနည်းငယ်မျှကြီးသော အပေါက်တစ်ခု ဖောက်ကာ နေ့စဉ် မြစ်အတွင်းသို့
ရေခပ်တာဝန်ပေးစေလွှတ်ထားသည်။ ထိုရေထည့်သည့် အပေါက်မှာ အလွန်သေးငယ်သည့်အတွက် ရေပြည့်ရန် အလွန်ပင်ကြာမြင့်သည်။
ထို့ကြောင့် ရသေ့သည် ဗေဒါရီ မရှိသောအချိန်တွင် စိတ်ဖြောင့်လက်ဖြောင့် တရားအားထုတ်နိုင်သည်။
သရေခေတ္တရာသို့ ဆိုက်ရောက်လာသော အခါ မင်းသားနှစ်ပါးသည် ဗေဒါရီ နှင့် မြစ်ကမ်းတွင် ဆုံမိကြသည်။ ဗေဒါရီ ရေခပ်နေသည်ကို မြင်သောအခါ စူဠာသမ္ဘာ၀ က ဗူးသီးမှ အပေါက်ကို သံလျက်နှင့် ချဲ့ပေးသဖြင့် ရေကို အလွယ်တကူ ခပ်၍ ရသွားသည်။
ကျောင်းသို့ အလျင်အမြန်ပြန်ရောက်လာသောအခါတွင် ရသေ့က အကျိုးအကြောင်းမေး၍ မင်းသား နှစ်ပါးနှင့် တွေ့ခဲ့ကြောင် ပြောသောအခါတွင်
နောက်တွင် သရေခေတ္တရာတွင် မင်းဆက်ပြတ်သွားသောအခါ၌ စူဠာသမ္ဘာ၀သည် သရေခေတ္တရာကို သိမ်းပိုက်အုပ်ချုပ်သည်ဟု အဆိုရှိကြသည်။ မဟာသမ္ဘဝ မှာမူ စန္ဒမုခိဘီလူးမနှင့် ချစ်ကြိုးသွယ်မိပြီး ဗိဿနိုးမြို့ကို ထူထောင်ကာ နေထိုင်သည် ဟု ဆိုကြသည်။ မဟာသမ္ဘဝ နှင့် စန္ဒမုခိတို့မှ သမီးတော် ပန်ထွာဘုရင်မ ကို ဖွားမြင်သည်။
ဘာရယ်မဟုတ်.. ။ ရုပ်ရှင်ရိုက်ရင်.. တော်တော်မိုက်မယ်လို့.. ထင်လို့..။
ဇာတ်ဝင်တေးအဖြစ် ထည့်ပြီး…မော်ဒန်ဆန်ဆန် ရိုက် လိုက်သင့်
ပို့စ်မရှိ ဒဏ္ဍာရီတင်ဆိုသလိုဖြစ်နေဘီ :mrgreenn:
GoT ကိုပြန်ကြည့်နေတာ…။ Season ၆ခုဆို.. DVD အပြား၃၀လောက်ရှိတယ်။
အဲဒါကိုကြည့်ကြည့်ပါလား..။ အဲလိုကားတွေ မြန်မာပြည်မယ်ပြသင့်တယ်လို့.. ထင်တယ်..။
အဲဒါကြည့်အပြီး.. မောင်ပေါက်ကျိုင်းကို စိတ်ကူးပေါက်တာ…။
ဂုမှ ကြည့်သလား တဂျီးရဲ့။
ဂျီအိုတီ ကို ၂၀၁၅ ဧပြီမှာ အပိုင်း ၄၀ ကို တစ်လ အတွင်းဖြတ်ပြီးမှ ၄၀ ကနေ ၅၀ ကို ကြည့်။
နောက်တစ်နှစ် ၂၀၁၆မှ မှ ၅၀ ကနေ ၆၀ ထိ စောင့်ကြည့်နေရတာ။
ဒီနှစ်လည်း စိတ်ရှည်ရှည် စောင့်နေရ။
ကုန်းဘောင်မင်းဆက်ကို အာ့လို ရိုက်ကြမား
ဟိုကြည့်ဒီကြည့်.. ကြည့်ထားပြီး.. လွှတ်ထားပေးတာ..။
အခုလောက် ဆီစင် ၆ခုစုမိမှ…. တရက် ၈နာရီနှုန်းလောက်နဲ့ အစအဆုံးကြည့်လိုက်တာလေ..။
ဟိုကသတ်လိုက်.. ဒီကပြန်သတ်လိုက်နဲ့.. ကုန်းဘောင်မင်းဆက်ထက်စာရင်.. အဲဒီမောင်ပေါက်ကျိုင်းလိုဟာကို ရိုက်ရင်ကောင်းမယ်ထင်လို့…။ GoT မှာက. နဂါးတို့.. White Walker တို့အစား.. ဗမာကလည်း မခေဘူး.. ဘီလူးတို့.. ဗေဒါရီတို့ထည့်လိုက်ပြီးတာပဲ…
မအိပ်မနေ အသက်ရှည် ဒါပဲသိခဲ့ပါတယ်..ခုလိုအများကြီးရှိကြောင်းသိရတော့ပိုကောင်းပါတယ်..ဒါပေမဲ့သူများရေးထားတာပြန်မရေးရဘူးဆို..ဒါကြီးကသူများပိုစ့်ကြီးမဟုတ်ဘူးလားဟင်
ဘုန်းမီးနေလ မဟာအသောက ဇာတ်လမ်းတွဲကို ကြည့်နေရင်း အနော်ရထာမင်းကို ပြေးမြင်နေတယ်.. အနော်ရထာ ငယ်ဘဝကတည်းကနေ ဘုရင်ဖြစ်.. အရည်းကြီးတွေကို နှိမ်နင်း.. ထေရဝါဒပြည်တည်ထောင်.. ကျန်စစ်သားအထိ ဇာတ်လမ်းတွေ ဆက်လိုက်ရင်ဖြင့်..
2003 ‧ Drama film ‧ 1h 46m
စကား အတင်းစပ် စိတ်နည်းနည်းရှည်တဲ့နေ့ ဒါလေး ကြည့်ကြည့်ညော်။
အနုပညာဆွာ အရမ်းအားကောင်းရင် အပြစ်လို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ကိစ္စတွေပါ အမှန်လို့ ထင်လာအောင် ဆွဲဆောင်နိုင်တယ်ရယ်။
ခု မြင်ရတဲ့ ဇာတ်လမ်း အကျဉ်းလောက်နဲ့ဆိုရင်တော့
အပြစ် မဟုတ်သေးဘူး ထင်တာပဲ။
သူ့ စိတ်သူ မနိုင်လို့ ငယ်ဖြူ က နေ လူထွက်တယ်ပေါ့။
သင်္ကန်းကြီး ရုံပြီး မဟုတ်တာ လုပ်နေတာထက် သာပါသေးတယ်။
ထင်တာ ပြောရ ခေါင်းစဉ်ကြည့်ပြီး ပြောရရင်တော့
ကောင်မလေးနဲ့ ကြိုက် လူထွက် မြို့တက် အပျော်ကြီး ပျော်
ကြာလာတော့ ခေတ်ဒဏ် လူဒဏ် မြို့ဒဏ် တွေ မခံနိုင်တော့ဘဲ ဘုန်းကြီး ပြန်ဝတ်
အဲဒါက… ဘယ်မှာရှာရမလဲ.. ။
ဒီမှာ ကြည့်၊ တဂျီးး
ကျနော်ဖြင့် ကြည့်နေရင်း ဗမာ ပီပီ မင်းသားရှာနေတာ။
ဟောလိဝု ပိတ်သတ်ပီပီ လူစွမ်းကောင်းရှာနေတာ။
အကုန်တွေ သေကုန်တော့ ထခုန်ရ။
နောက်တော့ စိတ်လျှော့ပြီး အကုန်သေအေးတာပဲ စိတ်နဲ့ ထိုင်ကြည့်နေရတယ်။
mona smile says:
ခဏ ဝင်​ငံ လိုက်​အူးမျယ်​…မရှင်းလို့
မအိပ်​မ​နေ အသက်​ရှည်​ ဆိုတာ ကို နားမလည်​ဘူး…
မအိပ်​မ​နေ ဆိုတာ အိပ်​က်ို အိပ်​ရမှာ​လေ..ခု​မောင်​​ပေါက်​ကျိုင်းက မအိပ်​ဖူး​လေ…ရှင်​ပြပါအူး​လေ
ကျနော့ မေးဒါလား။ ဟီးဟီးး
ကျနော့ မန့်အောက်မှာမို့ ဝင်ဖြေလိုက်ဥမေ။
မအိပ်မနေ အလုပ်လုပ်တယ် ဆိုတဲ့ စကားအရတော့ မအိပ်ပဲ မနားနေပဲ အလုပ်လုပ်တဲ့ အဓိပါယ်ပဲလေ။
မအိပ်မနေ အသက်ရှည် ဆိုတာလည်း မအိပ်ပဲ မမှိန်းပဲ အမေ့မေ့အလျော့လျော့မဟုတ်ပဲ နေမှ အသက်ရှည်မယ် ဆိုတဲ့ သဘောထင်ရဲ့။
တရက်ကို သာမန်အိပ်ချိန် ၇နာရီဆိုပါစို့..။ ၁ရက်တနာရီလျှော့အိပ်ရင်.. အိပ်ချိန်တရက် ၅နာရီ..။
ဆိုတော့.. တနှစ် ၃၆၅နာရီ။
လူ့သက်တမ်း ပျမ်းမျှ အနှစ် ၆၀ထား..။
အနှစ် ၆၀… မှာ.. ၂၁၉၀၀ နာရီ. အမြတ်ထွက်သဗျ..။
နှစ်နဲ့တွက်ရင်.. မအိပ်မနေ တရက်တနာရီပဲပိုယူ.. လူသက်တမ်းတူမှာ..သာမန်ထက်.. ၂နှစ်ခွဲ အသက်ပိုရှည်တဲ့ အဓိပ္ပါယ်..။
မောင်ပေါက်ကျိုင်းကတော့.. ဖောက်ပြန်တဲ့မိန်းမယောက်ျား နဂါးကို မအိပ်ပဲစောင့်သတ်လိုက်နိုင်သမို့.. အသက်ရှည်တယ်ဆိုတာပဲ..။
ဒဏ္ဍာရီ ထဲက ဗိဿနိုး
Posted by Aung Ko Min at 02:52
ကျွန်တော်..ခုဆိုရင် ပန်ထွာဘုရင်မရဲ့ စံမြန်းရာ ကျိန်စာသင့်မြို့ဟောင်း ဗိဿနိုး နဲ့ မိုင် ၅၀ ဝန်းကျင်မှာရှိနေတယ်..။
ညအိပ်ရာဝင်တိုင်း..ဗိဿနိုးက ပန်ထွာ ၊ သရေ ခေတ္တရာက ဒွတ္တဘောင်…မျက်စိထဲမှာ မြင်လာတဲ့ အထိ ဇာတ်လမ်းစဉ်ကြည့်မိတယ်…။
ကလေးဘဝက အဖေပြောပြခဲ့တဲ့ ဒဏ္ဍာရီထဲက မောင်ပေါက်ကျိုင်း..။နောက်တော့ဘုရင်မောင်ပေါက်ကျိုင်း..ပေါ့..။ဘာမှမတတ်တဲ့ဘုရင် သူ့ဆရာဆီက သုံးခုပဲသင်လာတယ်..။
“မအိပ်မနေ အသက်ရှည်..၊ သွားပါများ ခရီးရောက်၊ မေးပါများစကားရ။”…တဲ့.။
စာတတ်ပေတတ် ကိုအမတ်တို့ရဲ့ ကျေးဇူးကြောင့် ဘုရင်မမြဲတဲ့ ပလ္လင် သူ့ကိုအတင်းဆွဲတင်ကြတယ်လေ..။နဂါးနဲ့အကြောင်းဆက် ပေါင်းဖက်နေတဲ့ မိဖုရား..။ ပေါက်ကျိုင်းနဲ့တွေ့တော့မှ နဂါး ကား သွားတယ်..။ သွားပါများ ခရီးရောက်ပြီး မေးပါများ စကားရ ၊ မအိပ်မနေ အသက်ရှည်လိုက်တာ မိဖုရားနဲ့ အကြောင်းဆက် ကလေးနှစ်ယောက် ထွက်ခဲ့တယ်။ မျက်ကန်း အမွှာပူး အိမ်ရှေ့စံရာထူးနဲ့မတန်လို့ ပေါင်မုန့်ခြောက်နဲ့ ဆတ်သားကင် ၊ဝီစကီတစ်ထဖာ ရေသန့်နှစ်ပါကင် ၊မြန်မာဘီယာပုလင်းတွေပါ ဖောင်ပေါ်တင်ပြီး ဧရာဝတီမြစ်ကြောစုန်မျှောလိုက်တယ် ဆိုပဲ..။ဇော်ဝင်းထွဋ်ရဲ့ ရွက်လွှင့်ခြင်းသီချင်း ကို ခံစားချက်ပြင်းပြင်းနဲ့ သီဆိုရင်း..သစ်တစ်ပင်ရဲ့ထိပ် ဖောင်သွားချိပ်တယ်..။သောက်သောက်စားစား ရှေးဟောင်းသင်္ဘောသားနှစ်ယောက်ဆတ်သားအကင်တွေပျောက်ပျောက်နေတဲ့အပြင်
ဝီစကီ ပုလင်းကိုခိုးမော့ လျှော့လျှော့သွားတာ ..မျက်မမြင်ညီအကို လစ်မစ်တွေလိုလိုသွားတာပေါ့..။တစ်နေ့တော့ ဘီယာပုလင်းဖွင့်သံ ဖောက်ခနဲအသံကြောင့် လက်သွက်တဲ့ငနဲက ဖတ်ခနဲ ဖမ်းဆွဲလိုက်တာ..ရုန်းလို့မရတော့တဲ့ ဘီလူးမ တောင်းပန်ရတော့တာပေါ့ ။
အစ်ကိုကြီးတို့ရဲ့ တစ်ယောက်နှစ်လုံးပြန်သုံးလို့ ရအောင်ကုပေးမယ်ပေါ့ ။ဆိုပြီး စကုပေးတယ်..။Eye special list ဘီလူးမရဲ့ ကုသမှုစတင်တဲ့မြို့ ကို..ခု စကု လို့ခေါ်တယ်။မျက်စိမြင်တဲ့အထိ လိုက်ကြည့်ပေးရမယ်လေ။ခွဲစိတ်မှုအောင်မြင် ဂွမ်းစလေး စမြင်တဲ့နေရာကို မြင်ဂွမ်း ..ခု..မြင်ကွန်း လို့ခေါ်ကြတယ်..။အောင်မြင်မှုအထိမ်း အမှတ် ဖောင်ပေါ်မှာ ဆိုင်းဘုတ်တွေဘာတွေကပ်၊ မှတ်တမ်းတင်ဓါတ်ပုံတွေဘာတွေရိုက်ပြီး ဆရာမ က (အဲလေ) ဘီလူးမ ကပြန်သွားတယ်..။ဒါပေမယ့် ဘီလူးမ မှာကိုယ်ဝန်ပါသွားတယ်..။
ဘီလူးမ ကပဲ အညှာလွယ်တာလား..။ဟိုနှစ်ကောင်ကပဲ…(ထားပါတော့…)(ဒင်းတိုကလည်း မျက်စိဇုံလုံးကန်းနေလို့သာပေါ့။ အေးလေ..အချစ်မှာ ဟိုဒင်းမှမရှိတာ ..မျက်စိ)။
သို့ပေကမင့်..ဘီလူးမကတော့ ..သူ့လက်ကလေး ဆွဲလိုက်ရုံနဲ့ သန္ဒေခတာပါ…တဲ့။(မူးနေတော့လည်း တတ်နိုင်ဘူး..)
ဒါဆိုဘယ်ကောင်အရင်ဆွဲတာလဲ..(လက်ကို)..။ဘီလူးမလေး ကလေးမွေးပြီလေ..။တောင်တွင်းကြီးမှာ.(ဗိဿနိုးမှာ) မိန်းကလေး ၊အညာသူလေး..။ သူ့နာမည်က တောဂေါ်လီ (ဟယ်..စိုင်းစိုင်းနဲ့ ရောသွားတယ်)
နောက်တော့မှ ဗိဿနိုးပြည့်ရှင် ပန်ထွာဧကရီ။
ဟိုညီအစ်ကို အမွှာပူး မူးမူးနဲ့ရေစုန်မျောသွားလိုက်တာ..သောင်အစပ်မှာ ဖောင်သွားကပ်တယ်။ဟော..တွေ့ပါပြီ…ဘူးခြောက်ဘူးနဲ့
ရေခပ်နေတဲ့ (ဟုပေါင်) ဘူးသီးခြောက်နဲ့ ရေခပ်နေတဲ့ ထဘီစကတ်နဲ့ကောင်လေး..ပြည်သူလေး(သရေခေတ္တရာသူလေး)
လက်မငြိမ်တဲ့ အကြီးကောင်က ကောင်မလေးကို အပေါက်ကျဉ်းတယ်ဆိုပြီးသွားချဲ့ ပေးလိုက်သေးတယ်..။(ရေခပ်နေတဲ့ဗူးသီးခြောက်ကိုပြောတာနော်)
ဟဲ့ဗေဒါ ..ဗေဒါ နင့် ဘူးကိုဘယ်သူချဲ့ဆိုတာ..အနှီပုဂ်ဂိုပေါ့ ။
သူ့အဖေက ရသေ့ကြီးလေ..။မောင်ပေါက်ကျိုင်းမိဖုရားရဲ့အကိုကြီး..အမွှာညီနောင်ရဲ့ ဦးလေးကြီးပေါ့.။ပြည်ကိုဘယ်လိုရောက် နေတာလည်းဆိုတော့ ..ဝက်သောင်းကျန်းလို့ လိုက်သတတာလေ..။ဝက်မစွပ် တို့ ခုခေါ်နေတဲ့ ဝက်ပုတ်မြို့ မှာဝက်ပုတ်သွားလို့ဝက်သေကြောင်း သက်သေမပြနိုင်လို့မပြန်တော့ပဲနဲ့ တွေ့ရာအဝတ်ကောက်စွပ်လိုက်တာ အဲဒါနဲ့ရသေ့ဖြစ်သွားတာ နေမှာ..။တစ်နေ့တော့ရသေ့ကြီး ဘီယာအသောက်များပြီး သေးပေါက်ထားတာကို သမင်မက ဘာထင်လို့လဲမသိ အားရှိပါးရှိသောက်လိုက်တာ..ကိုယ်ဝန်ရှိသွားတယ်..တဲ့။(သမင်မလေး မျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက် ..နေ့စဉ်နဲ့အမျှစိတ်ဆင်းရဲရမှာဲ့နော်..)
နောက်ဆုံးလက်သည်ရှာကြည့်တော့ ရသေ့ သေးကိုသောက်မိ ကျွန်မအပြစ်ရှိ၏..ပဲလုပ်လိုက်ရတာပေါ့။ရသေ့ရဲ့တဲနား ကလေးမီးဖွားထားခဲ့တယ်..။
အလို လူသံပဲ..အူဝဲ..အူဝဲငို….။မိန်းကလေးပါလားသနားစရာ ဆိုပြီး ရသေ့ကြီးစတွေ့ ငုတ်တုတ်မေ့တော့တာပေါ့။ကလေးက ပါးစပ်ဖြဲငို သေးက ထပ်တလဲစ်ို ရသေ့ကြီး duty တွေပို ဆိုတာမျိုးတွေလာပြီပေါ့..။
မဗေဒါလေး အရွယ်ရောက်တော့ ဘူးသီးခြောက်အပေါက်ကျဉ်းကျဉ်းနဲ့ နေတိုင်းရေခပ်ဆင်းခိုင်းတယ်လေ..။(ဖြစ်ရလေ့ဗေဒါရယ်..ချောင်လေးမှာခို
မဗေဒါနေတဲ့ကျောင်းဆောင် ဟိုနှစ်ကောင်လိုက်သွားတယ်လေ.။ရသေ့နဲ့တွေ့တော့အကျိုးအကြောင်းမေးငါ့တူလေး ဆိုတာတွေဖြစ်ကုန်…။
မဗေဒါ နဲ့ ဘူးချဲ့ တဲ့ကောင်ကို မင်္ဂလာဆောင်ပေး ..ကလေးမွေးတယ် ပေါ့..။
မောင်လေး..ဒွတ်ဒွတ် နဲ့ မမပန်ပန်..။
အတိတ်ကံ အကျိုးပေး နဲ့ အညှိုးအတေး က ရင်မအေးစရာ..။
ပူးဖို ပူးမ လင်မယား လျှာနဲ့ခလုတ် သွားနဲ့ကိုက်မိကြတယ်လေ..။
KTV သွားတဲ့ ပူးဖိုယောကျာ်းကို အညိုးထားဆုတောင်းမှားသွားတယ်..။ငှက်ဖြစ်ရင် တစ်ကိုင်းထဲမနား ဆင်ဖြစရင်တစ်ကျွန်းထဲမစား..လူဖြစ်ရင်လည်း တစ်တိုင်းခြား ပါရစေ..ပေါ့။စိတ်ကောက်နေတဲ့ ချစ်မယားလေးပူးမ စိန်နားနပ်နဲ့ချော့ လည်း မပျော့ချင်တော့..။သူကလည်း ပြန်ဆုတောင်းနောင်ဘဝမှာ ကောက်ညှင်း တစ်အိုးထဲ ပေါင်းရပါစေ..ပေါ့။
ပူးဘဝကစုတေ ..ဘုရင်နဲ့ ဘုရင်မတွေ ဖြစ်နေကြပြီလေ..။ဒွတ္တဘောင်ရင်ထဲ ပန် မှ ပန် ပဲ ဖြစ်နေလိုက်တာ..။Facebookမှာ add တော့လည်း လက်မခံ confirm ပြန်မလုပ်..။တရုတ်နဲ့မြန်မာလို ဆင်နှစ်ကောင်နဲ့ ဖျံတစ်ရှင်း လဲ မလား ဆိုတော့လည်း ဟင့်အင်း..တဲ့။နောက်ဆုံးတော့ ပန်ပန်ဆီ စစ်ချီတယ်လေ..။မအောင်မြင်ဘူး..။ဘယ်နိုင်မှာလဲ ..အိုးစည်လိုလို ဗုံလိုလို ဟာမျိုးလေး ပန်ပန့် ကို ဟိုလူကြီးပေးထားတာရှိတယ်လေ။အဲဒါလေး တစ်ချက် နှစ်ချက်လောက် ထုလိုက်လို့ကတော့ လာတဲ့ စစ်တပ် ရေနှစ်သတ်လို့ ရတယ်လေ..။ကြံရာမရတော့တဲ့ ငဒွတ် ဘောင်းဘီကျွတ်အောင် စဉ်းစားရပြီပေါ့..။ကျွန်းသစ်နဲ့ ဓါတ်ငွေ့ ရောင်းလို့ရတဲ့ ငွေနဲ့ လိုင်စင်ကရတဲ့ အခွန်တော်ငွေကိုထုတ် ဘုန်းကြီးရုပပေါက်တဲ့ လူတစ်ယောက်ပန်ပန့် ဗုံ သွားဖောက်စေပေါ့..။မာယာပရိယာယ် အသွယ်သွယ်နဲ့ ဘုန်းကြီးယောင်ဆောင် သူလျှိုကောင်ကြောင့် ပန်ပန့်ဗုံ က ထမင်းဇလုံ လွတ်ကျတာလောက်တောင်မကျယ်တော့..။
ရှုံး ပြီ…ပန်ရှုံးပါပြီ ဒွတ်ရယ်..။
ဒါဟိုဘုန်းကြီးကြောင့်..။ဒင်းတို့က ပေလွှာ ပေရွက်မှာ ချဲတွက်(အဲလေ) စာရေးကြတာလေ..။အဲဒီပေပင် မကြီးစေခင်ဘူး ဆိုပြီး ကျိန်စာတိုက်လိုက်တာ..။အဲဒီပေပင် တွေ..နှစ်တောင်အမြင့် ကို ခုထိမတက်တော့ဘူးဆိုပဲ..။
ဗိဿနိုးက တိတ်တခိုး ပြောက်ကွယ် နေတဲ့ ဇာတ်လမ်း…။လွမ်းတော့လွမ်းချင်စရာ..။
အိမ်မှာ ကိုရီးယားရာဇဝင်ဇာတ်လမ်းတွဲတွေကြည့်ပြီးပြောနေတာ တို့နိုင်ငံမှာသူတို့ထက်ရိုက်စရာပိုများတယ် နန်းမတော်မယ်နု၊စုဖုရားလတ်၊မိဖုရားဖွားစော အများကြီးပါရိုက်ပါလိမ့်လို့
အဲ့ဒါတကယ်လား အပြင်မှာ နဂါးတကယ်ရှိတာလား